Fanohitohinana ny filaminana anatiny :: Nampidirina am-ponja vonjimaika i Rolly Mercia, minisitra teo aloha • AoRaha
Fanohitohinana ny filaminana anatiny Nampidirina am-ponja vonjimaika i Rolly Mercia, minisitra teo aloha
Nalain’ny mpitandro filaminana teny an-tranony, omaly, avy eo namoahan’ny Fampanoavana didy famonjàna vonjimaika eny Antanimora ny minisitry ny Serasera teo aloha, Rahajason Harry Laurent na Rolly Mercia. Mpianatra efadahy, nosamborin’ny zandary noho ny fitakian’izy ireo andalambe ny famoahana an’ilay mpitarika fihetsiketsehan’ny mpianatra, teny Ambohipo no niaraka nalefa taminy eny amin’ny fonjan’Antanimora.
Enjehina noho ny fanohintohinana ny filaminana anatiny ny minisitry ny Serasera teo aloha sy ireo lehilahy telo ireo. Omaly maraina, Rahajason Harry Laurent no nosamborin’ ny mpitandro ny filaminana tao amin’ny trano fonenany, teny Ambolokandrina. Niatrika famotorana sy notazonina teny amin’ny Kaomisaria foibe teny Tsaralalàna avy hatrany izy.
Fantatra fa nanonona ny anaran’io minisitra teo aloha io iretsy mpianatra efatra voatondro ho nanakorontana sy nanao fanakanan-dalana teny Ambohipo ireto, tamin’ny alatsinainy lasa teo. Notakian’ izy ireo tamin’izany ny famoahana an-dRavelomanantsoa Berija, mpitarika ny hetsiky ny mpianatra teny Ankatso izay mbola voatazona any am-ponja ihany koa.
Nambaran’ny loharanombaovao akaiky ny famotorana an’ity raharaha ity eny amin’ny Sureté urbaine d’Antananarivo fa: “nolazain’ireo mpianatra ho nanome vola azy ireo itsy minisitra teo aloha itsy. Tsy vitan’ izay fa mbola nampanantena ihany koa izy hanome vola an’ ireo mpianatra aorian’ny hetsika ataon-dry zareo”.
Naharitra ora maro ny fanolorana an’ireo voampanga amin’izao raharaha fanohintohinana ny filaminana anatiny izao teny amin’ny Fampanoavana, omaly. Nahazo fahafahana vonjimaika kosa ny vehivavy iray, taorian’ny fihainoan’ny fampanoavana azy.
Fahamaizan’i ONE :: Mitory olon-tsy fantatra ny minisiteran’ ny Tontolo iainana